Homeसमाचारकुन उमेरको मान्छेले कति घण्टा सुत्नुपर्छ ? बिस्तृत रुपमा हेर्नुहोस्
November 1, 2020 admin समाचार 8702
मानिसको उमेरका हि’सावले निद्राको आवश्य’कता पर्ने एक अनुसन्धानले देखाएको छ । संयुक्त राज्य अमेरि’काको राष्ट्रिय निद्रा फाउण्डे’शनले गरेको अनुस’न्धानमा जनाइए अनुसार विभिन्न उमेरका मानि’सहरुको निद्राको आवश्य’कता पनि फरक हुने गर्छ ।
तपाईंले कति घण्टा सुत्नु पर्छ ? हामी’हरु प्राय:ले आफूलाई पर्याप्त निद्रा नपुगेको’ सहजै थाहा पाउछौं। तर प’र्याप्त निद्रा भनको कति हो त ? अमे’रिकामा हालै गरिएको एक अनुस’न्धानले भनेको छ त्यो तपाईंको उ’मेरमा भर पर्छ।
सुत्ने नियमि’तताको अ’भाव, मदिरा, कफी र इनर्जी ड्रिंक्स जस्ता पेय पदार्थको सेवन, अलार्म घडी र दिनको प्रकाश जस्ता कुराहरुले मानिसको बायोलो’जीकल क्लक अर्थात जै’विक घ’डीलाई प्रभावित गर्ने गर्छ ।
अमेरि’कामा भर्जीनीया राज्यको आर्लींग’टनमा का’र्यालय रहेको निद्रा विषयमा अनुस’न्धान गर्ने एउटा संस्था न्या’शनल स्लीप फाउ’ण्डेशनका अनुसार व्यक्तिको निद्राको आव’श्यकता उस्को जीव’नशैलीमा आधारित हुने गर्छ।
नवजात शिशुह’रुलाई अरु उमेरका मानि’सभन्दा बढी निन्द्राको आवश्यकता पर्छ, तिनी’हरुका लागि १९ घण्टासम्म सुत्नु सा’मान्य हो। फोटो: थिंकस्टक तर उमेरले पनि मानिसको निन्द्रा’को आवश्यकतामा महत्व’पूर्ण भूमिका निर्धारण गर्ने गर्छ।
नवजात (०-३ महिना): भर्खर जन्मेका बच्चा’हरुले सामान्य’तया दैनिक १४ देखि १७ सुत्नु पर्दछ। ११ देखि १३ घण्टा सुत्दा पनि तिनीहरुलाई निद्रा पुग्छ, तर १९ घ’ण्टाभन्दा बढी सुत्न दिनु हुंदैन।
शिशु (४-११ महिना): यिनीहरु’का लागि उपयुक्त १२ देखि १५ घण्टाको निद्रा हो। कम्तीमा १० घण्टा सुत्दा पनि निद्रा पुग्न सक्छ तर शिशुहरुलाई १८ घण्टाभ’न्दा बढी कहि’ल्यै सुत्न दिनु हुंदैन।
वामे सर्नेहरु (१-२ बर्ष): यो उमेरका बच्चा’हरुले ११ देखि १४ घण्टा सुत्नु पर्छ। यिनीह’रुका लागि स्वीकार्य ‌९ देखि १६ घण्टाको निद्रा हो।
विद्यालय जानु अघि’का(३-५ बर्ष): विशेष’ज्ञहरु यो उमेर समूहका बच्चाहरुले १० देखि १३ घण्टा सुत्नु पर्ने बताएका छन्। तर ८ घण्टाभन्दा कम र १४ घण्टा भन्दा बढी निद्रा यिनीहरु’लाई उपयुक्त हुंदैन।
स्कुले उमेरका (६-१३ बर्ष): अमेरिकी निद्रा फाउ’ण्डेशनका अनुसार यो उमेरकाहरुले ९ देखि ११ घण्टा सुत्नुपर्छ। ७ घण्टा भन्दा कम र १२ घण्टा भन्दा बढीको निद्रा यिनीह’रुका लागि स्वस्थ मानिएको छैन।
किशोरकिशोरी (१४-१७ बर्ष): किशोरकि’शोरीहरुका लागि सुझाइएको निद्राको अवधि ८ देखि १० घण्टा हो। तर यिनी’हरुले ११ घण्टाभन्दा बढी र ७ घण्टा’भन्दा कम सुत्नु उपयुक्त नहुने अमेरिकी निद्रा फाउण्डेशनले जना’एको छ।
युवा (१८-२५ बर्ष): युवा उमेर समूह’काहरुले ७ देखि ९ घण्टा सुत्नु उपयुक्त हो। तर यि’नीहरुले ६ घण्टा भन्दा कम र ११ घण्टा भन्दा बढी सुत्नु हुंदैन।
वयस्क (२६-६४ बर्ष): यो उमेर समूह’का लागि सुझाइएको निद्राको अवधि युवाह’रुको लागि जस्तै छ।
बृद्ध (६५ बर्ष भन्दा माथि): यो उमेर स’मूहका मानिसहरु’का लागि दैनिक ७-८ घण्टा’को निद्रा स्वस्थ मानिएको छ। तर यिनीहरुले ५ घण्टाभन्दा कम र ९ घण्टा’भन्दा बढी सुत्नु स्वस्थ होइन । -खबरहब बाट
यी हुन् बिहानै मनतातो पानीमा मह र कागती मिसाएर खानुका फाइदा
March 24, 2021 admin समाचार 4118
नुवाकोट कि सुष्टि तामाङ । जस्को आ’र्कषक जीउडाल, सुन्दर मुहार, हँसिलो बोली, मिजा’सिलो बानी, जो आफैमा निकै नै मेहेन’तिपनि अनि एउटी असल आमापनि । यतिबेलाको सम’यमा उनै सृष्टि समाजिक सञ्जालमा चिया वालीको नामबाट निकै नै
February 24, 2021 admin समाचार 4409
May 4, 2021 admin समाचार 4803
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (220865)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (220717)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (215438)